Doorka uu Imaaradka Carabta ku lahaa shirkii fashilmay ee doorashooyinka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 6 April 2021 8 April 2021
Dowladda Imaaradka Carabta oo si weyn uga soo horjeeda Dowladda Federalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka shaqeysay inuusan guuleysan wadahallada doorashooyinka ee ka socda Villa Soomaaliya.
Imaaradka Carabta oo xiriir la leh maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ballanqaadyo badan u sameeyay hadii ay fashiliyaan dadaalalada dowladda Federalka Soomaaliya.
Imaaradka Carabta ayaa 100 Milyan oo Doller ku bixinaya sidii ay ugu soo laaban lahaayeen saaxadda siyaasadda Soomaaliya iyagoo wata musharax madaxweyne oo danahooda ka shaqeeya.
Puntland oo si dhaw xiiriir wanaagsan u la leh Imaaradka Carabta ayaa wax ay ku faanto u aragtay iney fashiliso shirkii madaxda ee ka socday Afisiyooni.
Isla maanta Dowladda Imaaradka ayaa Deeq Raashiin ah ka dejisay magaalada Garoowe ee maamul Goboleedka Puntland taa oo ah abaal marin ay ku muteysatay sidii ay u fashilisay dadaaladii doorasho ee socday.
Sidoo kale dowladda imaaradka ayaa hub iyo saanad ciidan u diyaarisay madaxweynaha Puntland oo hadda u muuqda inuu u xuub siibtay dagaal ooge oo kale.
Waxaa dhanka kale jira xogo sheegaya in saraakiil katirsan Imaaradka Carabta ay ka shaqeynayan xafiiska madaxweyne Dani kuwaa oo mar walba dejinaya qorshe cusub oo lagu carqaladeyn karo doorashada dalka in heshiis lawada gaaro.